यी हुन विश्वका १० शक्तिशाली जासुसी संस्था - JagaranPost
Home/विश्व/यी हुन विश्वका १० शक्तिशाली जासुसी संस्था
विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूले आन्तरिक सुरक्षा, अर्को देशको सरकारको सूचना लिन जासुसी संस्थाहरू स्थापना गरेका हुन्छन् । विश्वमा अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, रुस, चीन लगायत मुलुकका जासुसी संस्थाहरू बढि शक्तिशालीमा मानिन्छन् । कुन बढि शक्तिशाली भन्ने निर्णय ति संस्थाहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका आधारमा हुने गरेको छ । सन २०१५ मा विश्वको सबैभन्दा बढि शक्तिशाली जासुसी संस्थामा पाकिस्तानको आइएसआई परेको छ ।
१. आइएसआई(पाकिस्तान) –भारतबाट छुट्टिएपछि पाकिस्तानले सन १९४८ मा स्थापना गरेको आइएसआईको मुख्य विशेषता भनेको यसको सतही गतिविधि शुन्य प्रायः हुन्छ । यो संस्थाले पहिचानको लागि कुनै लोगो वा चिन्ह प्रयोग गर्दैन । जासुसीमा यो संस्थाको सफलता उच्चदरमा छ । आइएस आईका कति एजेन्ट विश्वभर छरिएका छन्, कसैले भन्न सक्दैन । अनुमानतः १० हजार जासुस विश्वभर फैलिएका छन् । यति भएर पनि यो संस्थाको सबैभन्दा ठूलो असफलता ओसमा विन लादेन अबोट्टावादमा लुकेको थाह नपाउनु बन्यो । अमेरिकी सेनाको कारवाहीमा अबोट्टबाद मै लादेन मारिएका थिए ।
२.सिआइए(अमेरिका)– सूचना संकलनका लागि सबैभन्दा बढि खर्च गर्ने संस्था अमेरिकाको सिआइए हो । यो संस्थाका लागि काम गर्ने जासुसहरू विश्वभर फैलिएका छन् । २२ हजार भन्दा बढि जासुस यस संस्थाका लागि काम गर्ने अनुमान गरिन्छ । कतिपय मुलुकका शक्तिशाली व्यक्तिहरू पनि सिआइएका एजेन्ट छन् ।
३.मोसाड(इजरायल) – इजरायललाई प्यालेस्टाइनीहरूको प्रभावबाट जोगाउन मोसाडले महत्वपूर्ण काम गर्छ । यसलाई अमेरिकाले समेत सहयोग गरिरहेको छ । भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ संग पनि मोसाडको निकट सम्बन्ध रहेको विश्वास गरिन्छ ।
४. एम सिक्स्टीन(बेलायत)– आन्तरिक सुरक्षा र आतंकवादविरुद्धको लागि मुख्य रुपमा काम गर्ने बेलायतको एम सिक्स्टीन पनि विश्वको शक्तिशाली जासुसी संस्था मध्येको एक हो । इजरायल र अमेरिकाको जासुसी संस्थासंग यसको बलियो सम्बन्ध रहने गरेको विश्वास गरिन्छ ।
५.एमएसएस(चीन) – चीनको जासुसी संस्था मिनिस्ट्री अफ स्टेट सेक्यूरिटी(एमएसएस) सन १९३७ मा स्थापना भएको थियो । विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक हुने दौडमा रहेको चीन सबैभन्दा बढि जनसंख्या भएको देश पनि हो । एमएसएसका जासुसहरू पनि विश्वभर फैलिएका छन् ।
६.एफएसवी(रुस)– सोभियत यूनियनको विघटन पछि एफएसवी कमजोर हुन पुग्यो । यो संस्थाले भारतको ‘र’ संग मिलेर कामहरू गर्छ ।
७.डिजिएसइ(फ्रान्स)– यो जासुसी संस्थाको काम गर्ने शैली फरक छ । यसले विदेशी सरकारको चियोचर्चो भन्दा आन्तरिक सुरक्षामा बढि ध्यान दिन्छ । अपराध न्यूनिकरणमा यो संस्थाको बढि समय खर्च हुन्छ । फ्रान्समा अपराधको संख्या कम हुदै जानुमा यो संस्थाको भूमिका पनि एक हो भन्ने गरिन्छ । यसले अन्य जासुसी संस्थाको जस्तै विशेष एजेन्ट अलावा सामान्य सूचकहरू पनि तयार पार्छ । करिब ५ लाख मानिसहरू डिजिएसइका लागि काम गर्ने अनुमान गरिन्छ ।
८. ‘र’ (भारत)– रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (र) भारतको स्वतन्त्र गुप्तचर निकाय हो । यो संस्थाले आफ्नो प्रतिबेद सोझै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउ“छ । यो संस्थाले गरेको काम, खर्चबारे कहि कतै प्रश्न उठाउन पाइदैन । भारतले आफनो सत्रु राष्ट्र मानेको पाकिस्तानविरुद्ध जासुसी गर्नु र पाकिस्तानको पक्ष लिएर भारतविरुद्धको गतिविधि गर्नेलाई सफायासम्मको गतिविधि ‘र’ गर्छ ।
विश्वका शक्तिशाली मानिने अन्य दुई जासुसी संस्था क्यानडाको सिएआइएस र अस्टे«लियाको एसआइएस हो।
ओभरटाइम कामले लियो २७० को ज्यान